ဘင်္ဂလာ-မြန်မာနယ်စပ် တလျောက် မြန်မာဘက်က ခြံစည်းရိုး ကာရံမည်
soeaung on Tue Mar 17, 2009 7:39 am
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နှင့် ဆက်စပ်နေသော နယ်စပ်တလျောက်တွင် တရားမ၀င် လူများ ၀င်ထွက် သွားလာနေမူကို တားဆီးရန် အတွက် မြန်မာဘက်က ခြံစည်းရိုး ကာရံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖေါ်လိုသူ အစိုးရ အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
သူက “ ကုန်တွင်းမိုင် အရှည်က စုစုပေါင်း ၁၃၀ ရှိပါတယ်။ မောင်တောကနေ အိန္ဒိယ နယ်စပ် ပလက်ဝ အထိပေါ့နော်။ အကုန်လုံးကို ခြံစည်းရိုးကာရံသွားပါ့မယ်။ နိုင်ငံတော် အတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ နောင်မှာ မပေါ်ပေါက်ရအောင် လုံခြုံရေး အရ ကြိုတင်ပြီးတော့ ပြုလုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။
ယခုအခါ အဆိုပါ ခြံစည်းရိုးကာရံမူ လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နယ်စပ် တလျောက်တွင် စစ်သားအများအပြားရောက်ရှိနေသည်ဟု ဒေသတွင်းကလာသော သတင်းများအရ သိရသည်။ အမည်မဖေါ်လိုသူ မောင်တောမြို့ခံ တဦးက “ ကြိမ်ချောင်းကျေးရွာကို စစ်သား ၂၀၀ ခန့် ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ဘားဝါယာတွေလည်း အများအပြား သူတို့နဲ့ အတူ ပါလာပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ဘားဝါယာကြိုးတွေကို ဆက်လက် သယ်ယူနေတုန်း ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။
ယမန်နေ့ သင်္ဘောများဖြင့် ဘာဝါယာများကို စစ်တွေမှ တဆင့် မောင်တောသို့ သယ်ယူလာခဲ့ပြီး ကညင်ချောင်း ဆိပ်ကမ်းတွင် ဘာဝါယာအများအပြားကို စုပုံထားသည်ဟု မျက်မြင် တဦက အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
ခြံစည်းရိုးကာရံမူကို မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော နစက အမှတ် (၁)နှင့် အမှတ် (၂) နယ်မြေမှ စတင်ပြီး ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စီမံကိန်းကို စစ်တပ် တပ်ရင်း ၄ ရင်းမှ တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခု ခြံစည်းရိုးကာရံမူ စီမံကိန်းကို မြန်မာ နအဖ စစ်အစိုးရမှ မူဆလင် လှေစီး ဒုက္ခသည် ပြဿနာပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်ပိုင်း စီစဉ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
Re: ဘင်္ဂလာ-မြန်မာနယ်စပ် တလျောက် မြန်မာဘက်က ခြံစည်းရိုး ကာရံမည်
baganland on Tue Mar 17, 2009 9:23 pm
DHAKA: Bangladesh says its eastern neighbour Myanmar is "unilaterally" erectingabarbed wire fencing along its border and has mobilised troops and naval force.
Tension runs high along the Bangladesh-Myanmar 200 km long border, The Daily Star said Tuesday quoting unnamed defence sources.
Bangladesh Foreign Secretary Mohammad Towhid Hossain confirmed that Myanmar started mobilising its forces in the bordering areas since an incident in the Bay of Bengal in November.
"The reinforcements are still there but we do not have any information about the construction of fences," Hossain said.
"Bangladesh has no problem if Myanmar erects fences on their territory, he said adding, "It will curb smuggling and illegal trespassing".
Myanmar started putting up barbed-wire fences along its borders with Bangladesh last November when its naval ships intruded into Bangladesh's maritime boundary. But the construction of the fences became visible recently, Bangladeshi officials claimed.
Sources said an airport in Myanmar's Sitwe town, close to Bangladesh border, is being revamped through construction of long runways.
Myanmar has also mobilisedanumber of China-made naval ships close to its maritime boundary with Bangladesh.
Defence sources said they have information that the Myanmarese military rulers were unhappy that the country in early November had to withdraw an oil and gas-drilling rig from Bangladesh's maritime boundary which they claimed as theirs.
Since then Myanmar has kept its soldiers on high alert alongside Bangladesh border while Bangladesh also put its troops on alert for some time.
"As tension mounts, smuggling in the bordering areas stopped totally.
"A Myanmarese drilling rig was positioned close to Bangladesh maritime boundary the day before yesterday. But it did not enter our waters," saidasource.
The government has already been informed about the prevailing situation but no specific instructions were given to the army, navy or air force.